Itoobiya oo dib u dooratay Abiy Ahmed Ali iyo hogaaminta laga filaayo shanta sanadood ee soo socda | Qaran News
Itoobiya oo dib u dooratay Abiy Ahmed Ali iyo hogaaminta laga filaayo shanta sanadood ee soo socda
Writen by Qaran News | 11:29 pm 7th Oct, 2021
ETHIOPIA OO DIB U DOORATAY ABIY AHMED ALI IYO HOGAAMINTA LAGA FILAYO SHANTA SANADOOD EE SOCOTA
Ethiopia waa dawlad ka mid ah dawladaha aduunka ugu da’da weyn marka taariikhda la raaco , waa dal taariikh weyn oo mug leh ku leh aduunyada iyo qaarada Africa .
Waxaa ku nool qoomiyado kala duwan oo lagu qiyaaso ilaa 82 qoomiyadood , dalka Ethiopia waxa uu soo maray nidaamyo maamul oo kala duwanaa oo ay ka mid yihiin.
2- Maamul Ciidan
3- Nidaam rayid oo taladu urursan tahay ( Autocracy)
4- Nidaam dimuqaradi ah.
Habka ugu dambeeya ee dimuqaradiyada tooska ah waxaa hindisay oo aragtideeda watay markii uu talada dalka Ethiopia yimid Raisal wasaare Abiy Ahmed sanadkii 2018kii bishii April , xiligaasi oo kacdoono joogsan waayey mudo labasanadood ahi ay dhaliyeen in uu talada dalkaasi lagu wareejiyo qoomiyada oromada oo ahayd dadka kacsanaa.
Horaantii taladiisa waxa u qabsoomay wax aan soddonkii sanadood ee u dambeeyay Ethiopia ka qabsoomin oo ahayd in uu la heshiiyey maamulka Asmara oo ay Addis-Ababa isku hayeen soohdinta u dhaxaysa labada dal ee Badhame ( Badame ).
Halkaasi waxa uu ku mutaystay Abiy Ahmed in la siiyo abaal marinta nabada aduunka ee loo yaqaano “Noble peace price ” sanadkii 2019kii waxaana uu magaciisu gaadhay aduunka oo dhan oo waxa uu noqday hogaamiye African ah oo saameyn iyo wax la yaab leh soo kordhiyey.
Sanadkii 2020 bishii Aug waxa dalka Ethiopia ka qorsheysnaa in doorashooyin ka dhacaan xiligaasi oo ahaa xiliyadii uu xanuunka #Coronavirus aduunka sida halista ah uga jiray waxaana dib loo dhigey doorashooyinka Ethiopia.
Ethiopia waa dal federal ah oo ka kooban 9 maamul goboleed , doorashooyinkaasi waxa diiday maamulkii iyo dawladii gobolka waqooyi ee Tigray, oo marka horeba saluugsanaa talada Abiy Ahmed una arkayey in uu duulimaad ku yahay qoomiyada ay yihiin oo dalka Ethiopia 27 sanadood talada u hayey , iyo waliba in uu bixiyey dhul Ethiopia leedahay oo ay ku wayday dad iyo duunyo badan oo aan qiyaas lahayn.
Sidoo kale waxaa la beegsaday dhamaan madaxdii maamulkaasi oo la qoray dambiilayaal oo jeelal lagu guray badhna dibadaha u yaaceen , waxaana uu arinkaasi ula muuqday mid ka dhan ah xukuumadii EPRDF ee Ethiopia ka talinaysay todoba iyo labaatanka sanadood oo ay gadhwadeen ka ahayd TPLF.
Bishii Nov 2020 waxaa dagaal lagu qaaday saldhigii ugu weynaa ciidamada Ethiopia oo ku yaalay gobolka Tigray , waxaana bilaabmay dagaal dawlada Ethiopia iyo TPLF u dhexeeya , xiligaasi waxa uu sheegay Abiy Ahmed in lagu kalifay in uu dagaal qaado sharcina ay tahay in uu difaaco qaranimada dalka Ethiopia.
Dagaalkaasi waxa ka soo baxday natiijo aan wanaagsanayn oo waxa la duqeeyey magaalooyin dhisan , dumar iyo caruur aan waxba galabsan ayaa ku dhintay badhkoodna ku barakaceen dalka Ethiopia dhexdiisa iyo dawlada deriska la ah ee Sudan , waxaa dhacay xaalad bini-adenimo oo xumaatay iyo dhibaato badan oo dhacday.
Dawladaha Caalamka , hay’adaha gargaarka binu adenimo , ururada xuquuqal insaanka iyo bulshada rayidka ah u dhaq-dhaqaaqda binu ademku waxa ay cambaareeyeen waxii ka dhacay gobolka Tigray , waxaana Ethiopia la saaray cadaadis diblomaasiyadeed oo ilaa hadda meelo badan ka haysta.
Dalalka xulafada la’ ahaa Ethiopia oo ay Somalia iyo Erateria ahaa ayaa lagu eedeeyey in ay dagaalkaasi dhan ka ahaayeen , waxaa sidoo kale taageeray dagaalkaasi dawlado gobolka Geeska Africa ah oo Ethiopia ay dano isku qabaan , waxaa xataa la tuhunsan yahay in dawlada Ethiopia gargaar ka helaysay dawlado ka baxsan gobolka oo badhkood saldhigyo ciidan ku leeyihiin mandaqadda.
DOORASHADII ABIY AHMED ALI
27 June 2021 waxaa dalka Ethiopia ka dhacday doorasho heer federaal iyo mid dawlad goboleed ah , walow aanay ka dhicin sadexda gobol ee Somalida , Tigray iyo Adarida oo soomaalida ay ka dhacday bishan Oct 2021.
Waxaa aqlabiyadii kuraasida dalka Ethiopia helay xisbiga uu hogaamiyo Raisal wasaare Abiy Ahmed ee PP (Ethiopian prosperity party ) waxaana 5 Oct 2021 mar labaad loo caleemo saaray hogaamiyaha shanta sanadood ee soo socota Abiy Ahmed Ali.
MAXAA LAGA FILAYAA HOGAAMINTIISA MARKAN LABAAD ?
Hadii aan dul istaago hawlaha iyo waxyaabaha laga sugayo xiligani oo ay Ethiopia meelo badan xaalado wanaagsanayni ka jiraan ayaa aan odhan karaa ;
1- Adkaynta midnimada iyo wadajirka dalka Ethiopia.
2- Dhameynta khilaafyada dawlad deegaanada sida Somalida iyo Canfarta , Amhara iyo Tigray isaga oo hore ugu guuleystay Somalida iyo Oromada khilaafkoogii.
3- nooleynta iyo soo celinta xidhiidhka Ethiopia iyo aduunka dawlado badan oo ka mid ah .
4- Ka garaabista xaaladaha binu-adenimada ee ka taagan waqooyiga Ethiopia iyo xal waara sidii loogu dhameyn lahaa.
5- khilaafkii biyo xidheenka ee ay isku hayeen Sudan iyo Masar.
6- Adkaynta cilaaqaadyada dawladaha gobolka oo aan isku san banaanayn iyo kaalinta ay ka ciyaari karto Ethiopia oo ah mid ka duwan qaabkii xulafooyinkii sadex geesoodka ahaa.